Izitshalo zeConiferous | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izitshalo zeConiferous
Incazelo yezinhlobo zemisedari nezinhlobo zazo (ngesithombe)
Kuwo wonke ama-conifers akekho umuthi olingana nomsedari ukuze kuvunyelwane ukuhlanganiswa kwamazwe okulima ingadi. Yilokhu abantu abaningi baseNgilandi abakucabange ngakho, okuchaza ngokugcwele lolu hlobo lwezitshalo ezivuthiwe ezivandeni ezithandekayo. Imisedari emibili noma emithathu ekungeneni kwendlu ayenele ukwakha ukwakheka kwezakhiwo, ukuyibeka ngendlela efanele futhi ngesikhathi esifanayo imikhosi.
Incazelo kanye nezithombe zezinhlobo ze-cypress
I-cypress encane ibheka ngokuvumelana nanoma yikuphi umhlaba wezwe. Ehlobo, zenza umehluko ezinhlobonhlobo zezimbali, futhi ebusika ziqeda insimu ye-gray grey. Izinhlobonhlobo zokuhlobisa izihlahla zalezi zihlahla ezivuthiwe ziyokwanelisa noma yimuphi umlimi wensimu. Lowo ofuna isihlahla ngesimo sekhandlela, futhi ofuna ukubona i-elf tree enhle noma i-shrub encane eklasini lakhe uzothola isitshalo se-coniferous.
Izinhlobo ze-cypress ezivamile
Ukujwayelekile kwezinguquko zethu ze-thuy nezinaliti eziluhlaza eziluhlaza kufana ne-cypress, indawo yakhe yokuzalwa ebizwa ngokuthi iNyakatho Melika, isiqhingi saseTaiwan naseJapane. Kuphelele, izinhlobo eziyisithupha eziyinhloko zalesi sihlahla ziyaziwa, ngaphakathi kwazo zonke izinhlobo eziningi ze-cypress ezilandelwayo. Zonke izihlahla zalolu hlobo lwama-genus zibhekwa umqhele we-pyramidal kanye namagxolo asundu omnundu.
I-Fir: izinhlobo nezinhlobo ezidumile kakhulu
I-Fir iyi-green coniferous egcwele umqhele. Umqhele we-fir uqala kusukela ku-stem. Emithini ekhulile, phezulu komqhele ugoqiwe noma ungabhalwa. Umbala we-periderm uwu-grey, awunamathele ezinhlobonhlobo eziningi ze-fir. I-periderm yezihlahla ezivuthiwe ziba zikhudlwana futhi ziqhekeke ngokuhamba kwesikhathi.
I-spruce yaseSerbia: indlela yokukhula kusayithi lakho
Enye yezinketho ezinhle kakhulu zokuhlobisa i-cottage yakho ehlobo yi-spruce yaseSerbia. Iheha abathengi hhayi kuphela izici zayo zangaphandle, kodwa futhi nokuhlala kwayo, kanye nokunethezeka kokunakekelwa. Kodwa ingabe lezi zici zanele ngokwanele ukuba ziphephe wonke amanye amaqembu? Incazelo emfushane yeSpey spruce, ogama lakhe lesayensi eliyi-picea omorika, limelela umndeni wasePine.
Isihlahla sikaKhisimusi: umhlobiso omuhle ngezandla zakho
Ikhalenda ivuselela ngokuzethemba amapheshana amakwe "December", okusho ukuthi uNyaka Omusha usondela. Ukuhleleka okujabulisayo, ukuhamba ngezinkambo, amapulani namaphupho - sijoyina kancane kancane le marathon. Kodwa into ebaluleke kunazo zonke yilo muthi kaKhisimusi, ngaphandle kwalokhu leli holide elingenakucabangela. Sifunda ukuhlobisa lesi sihlahla ukuze umhlangano wonyaka ozayo uhlale umemeza umcimbi oqhakazile.